January 22, 2021 - समृद्ध नेपाल
भेन्टिलेटरवाट बाहिर आए कञ्चन १७ दिन पछि आवाज निकाल्दा पनि लिए अनिषाको नाम !
सामाजिक सञ्जालमा अहिले कञ्चन र अनिषाको बारेमा निकै चर्चा भएको छ । अस्पतालमा उपचारार्थ रहेका कञ्चन १७ दिन पछि बोल्न सक्ने भएका छन् । उनले आफुले भोगेको पी डा को बोरेमा अर्ध चेतमा केही बताएका पनि छन् । नेपालको कानुन अनुसार उनीहरुको प्रेम र विवाह गर्ने उमेर भएको थिएन । सानै उमेरमा प्रेममा परेका उनीहरुले
न्यूज २४ छाडेपछि ग्यालेक्सीमा हाकिम बने रवि लामिछाने !
बहुचर्चित कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संगका प्रस्तोता तथा पत्रकार रबि लामिछानेले न्युज २४ छोडेको घोषणा गरेका छन् । उनले आज फेसबुक स्टाट्स लेख्दै भोलि प्रसारण हुने सिधा कुरा जनता संगको एक भागमा मात्र आफू देखिने बताएका छन् । भोलि प्रशारण हुने कार्यक्रमसँगै न्युज २४ टेलिभिजन सँगको सुखद सहयात्राबाट विश्राम लिन लागेको उनले बताएका छन यो
झाक्रीको घरमा नसोचेको भयो,दिदिले यसो भन्दा झाक्रीको थामिएन आँसु !
केही दिन अगाडिदेखि छ बर्ष अगाडी मृत्यु भएका जीवन राईको आत्मा हरेक बिरामीमा पसेर बोल्न थालेपछि गाउँ नै त्रसित बनेको भन्ने खबर धेरै मिडियामा आयो गाउमा धेरै युवतीहरु बिरामी पर्दै मुर्छा पर्न थालेपछी धेरै झाक्रीले चिन्ता बसे तर कसैले पत्ता लगाउनै सकेनन उल्टै झाक्री नै ढलेपछी झनै गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको र अन्त्यमा ताप्लेजुङका झाक्री
नेनरेन्द्रपालमा अज्ञात रोगका कारण भटाभट मर्न थाले कुखुरा !
हुम्ला गाउँपालिका–२ थालीमा अज्ञात रोगका कारण दैनिक १५देखि २०कुखुरा मर्ने गरेका छन् । विगत तीन दिनदेखि अज्ञात रोगका कारण यहाँका दैनिक करीब २०वटा स्थानीय जातका लोकल कुखुरा मर्ने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् पाँच दिन अगाडि मात्रै बाजुराको कोल्टीबाट सर्केगाड गाउँपालिका२ उनपानी र रिप गाउँका दुई जना व्यापारीले बिक्रीका लागि १६वटा कुखुरा ल्याएपछि गाउँका स्थानीय जातका लोकल
पत्थरीबाट जोगिन दैनिक सेवन गर्नुहोस् अमला !
अमलामा भिटामिन सी प्रसस्तै पाइन्छ । अमला त्रिफलाको ३औषधिमध्ये एक गुणी जडिबुटीमा पर्छ । भिटामिनको राम्रो स्रोत भएकै कारण अमलालाई हिन्दु धर्ममा पनि पुजनीय फलको रुपमा राखिन्छ । भनिन्छ ३वटा सुन्तलामा भन्दा १वटा अमलामा धेरै भिटामिन हुन्छ र अमलाको रुखको फेदमा छायाँमा बसेर खानाले मात्रै पनि अनेक रोगहरु निको हुन्छ । अमलामा विभिन्न रोगहरु निको
अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएका भारत्तोलनका विश्व च्याम्पियन रुप कार्कीको निधन !
दुई दशकबढी अमेरिका बसेर फर्किएका भारत्तोलक विश्व च्याम्पियन रुप कार्कीको निधन भएको छ । कार्की केही महिना अगाडि नेपाल फर्किएका थिए ।रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका ६भलवारी बस्दै आएका कार्कीको आज विहान हृदयघातबाट निधन भएको हो । बुटवलबाट काठमाडौं लैजादैगर्दा मुगलिन नजिकै बाटोमा निधन भएको जनाइएको छ ।नेपालमा भारत्तोलनको तालिम सचालन आगामी पुस्तालाई पनि विश्व च्याम्पियन स्तरमा
कपाल नबढेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? यी उपाय उपनाउनुहोस्
सबै महिलाहरूलाई आफ्नो क’पाल लामो र सुन्दर बनाउन मन पर्छ। तर चाहेर पनि बनाउन सकिरहेका हुँदैनौ । हामीले आफ्नो शरीरमा जुन चिज प्रयोग गर्छौ उसको प्रभाव हाम्रो कपालमा पनि पर्न सक्छ । कपाल राम्रो गराउनु भन्दा पनि पहिला झर्न रोक्नु पर्छ । कपाल निकै कम मात्रामा बढ्ने वा बढ्दै नबढ्ने समस्याका कारण धेरै हुन सक्छन्
कृपया सक्दो सेयर गरौ सकेको आर्थिक सहयोग गरौ !
ईलाम नगरपालिका ११सोयाकसोयाक ७स्थाइ घर भई रोजगारी को सिलसिलामा भारत को बेङ्लोर पुगेकी २३ बर्सिय खड्क कुमारी मगर (कल्पना मगर) को दुबै किड्नी फेल भई हाल झापा को बिर्ता सिटी हस्पिटलमा डाइलोसिस भई रहेको छ। निजको किड्नी प्रत्यारोपण को लागि ठुलो आर्थिक खर्च लाग्ने भएको र घरपरिवारको आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक भएको हुँदा देश बिदेशमा
भोलि १७ वटा नेपालीको शव मलेसियादेखि नेपाल ल्याइने !
नेपाल वायुसेवा निगमले मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट शनिबार एउटै जहाजबाट १७वटा शव नेपाल ल्याउने भएको छ । त्यसका लागि वाइडबडी जहाज ए३३०आज राती११ बजे क्वालालाम्पुर उड्ने छ । काठमाडौंबाट क्वालालाम्पुर जाने क्रममा भने १२जना यात्रु मात्र रहनेछन्।जहाज शनिबार बिहान ८ः४०बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । मलेसियाबाट नेपाल आउने क्रममा जहाजमा २५० हाराहारी यात्रु समेत
आकाशमा जहाज उडाउदै आइरहेकी नेपाली चेली !
केटी मान्छे भएर जहाज उडाउन डर लाग्दैन पेमा लामालाई धेरैको प्रश्न यही हुन्छ। विगत ६वर्षदेखि बुद्ध एयरको जहाज उडान गर्दै आएकी पेमा लामा यस्तो प्रश्न सोध्नेहरुलाई उत्तर दिन्छिन् डर होइन जहाज उडाउन पाउँदा गर्वको महसुस हुन्छ। हो महिलाले साहसिक काम गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता भएका व्यक्तिहरुले महिलाहरुले पाइलटको पेशा अपनाउनुलाई अझै पनि आश्चर्यको रुपमालिने गर्छन्।तर